UMoto Z4 uvuze ngokupheleleyo: I-Snapdragon 675, isikrini se-OLED, ikhamera ye-selfie ye-25 MP kunye nokunye | I-Androidsis
El Moto Z4 yi-smartphone ezayo evela kwi-Motorola. Kuya kuza njengendlalifa ye Moto Z3, Isiphelo esiphakamileyo esasungulwa kunyaka ophelileyo nge-Snapdragon 835 phantsi kwe-hood, kungekudala, nangona kunjalo sinamandla asezantsi eSoC.
Sele sithethile ngeMoto Z4 kwifayile ye- Ithuba elidlulileyo. Ngoku iposti yaseIndiya isandula ukwabelana nge Iimpawu eziphambili zeMoto Z4 kunye neempawu, icaphula ulwazi olufunyenwe kuxwebhu lwangaphakathi oluvunyiweyo lwenkampani uqobo.
UMoto Z4: nantsi into asigcinele yona iselfowuni, ngokokuvuza okutsha
Uxwebhu oluvunyiweyo lutyhile oko IMotorola Moto Z4 iza kufika ngescreen se-OLED esikwi-6.4-intshi ngesinotshi yesitayile samanzi. Isikrini siya kuthwala inkxaso ye-FullHD + isisombululo kwaye siya kudityaniswa nesifundi somnwe. Ingxelo entsha ichaza ukuvuza kwangaphambili okuye kwabanga ukuba iMoto Z4 iya kuba nescreen se-6.22-intshi.
Inkqubo yokusebenza I-Android 9 Pie kwinguqulelo yayo yoqobo iya kufumaneka kwisixhobo. Nangona kunjalo, iya kubandakanya ezinye zeempawu zeMotorola, ezinje ngeMoto Display, iZenzo zeMoto, kunye namava eMoto. Kwelinye icala, iqonga leselula Snapdragon 675 iya kuba namandla kwi-smartphone. Iya kuba sisixhobo esilungele i-5G njengoko kulindelwe ukuba ixhase i-5G Moto Mod ngesidibanisi se-pogo se-16 ngasemva kwayo.
I-Moto Z4 iya kuxhotyiswa enye Ikhamera engasemva eyi-48 megapixel. Iya kubandakanya inkxaso ephuculweyo yokufotwa kwemiboniso yasebusuku ngento ebizwa ngokuba ngumbono wobusuku. Ukuthwebula ii-selfie, ziya kuxhotyiswa ngekhamera yangaphambili ye-megapixel engama-25. Kwiimeko eziphantsi zokukhanya, itekhnoloji yeQuad Pixel iya kubamba imifanekiso ecace gca ye-6 megapixel. I-smartphone iya kuxhotyiswa ngemisebenzi yokufota ene-AI-enezixhobo kunye nezitikha ze-AR. (Fumanisa: IMotorola yokuphehlelela iifowuni ezininzi nge-Android One kungekudala)
Isiphelo siya kubandakanya ifayile ye I-3,600 mAh ibhetri eza kuza neTurboCharge iteknoloji yokutshaja ngokukhawuleza. Kulindeleke ukuba ifike ngomzimba onganyangekiyo kwaye ubonise i-jack audio ye-3,5mm.
Ixabiso le-smartphone lingaphantsi kwesongelo. Nangona kunjalo, Ukuvuza kuveza ukuba uMoto Z4 uya kubiza isiqingatha sexabiso leefowuni eziphambili. Ke ngoko, inokubizwa amaxabiso nge- $ 400 ukuya kwi-500 yeedola.
Okokugqibela, kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba ukuvuza kwangaphambili kuye kwatyhila ukuba isixhobo siza kufumaneka ngeendlela ezahlukeneyo ezinje nge-4 GB ye-RAM + 64 GB yokugcina kunye ne-6 GB ye-RAM + 128 GB yokugcina nokuba Akukho lwazi okwangoku ngomhla wokumiliselwa kwe-smartphone.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » UMoto Z4 uvuze ngokupheleleyo: I-Snapdragon 675, isikrini se-OLED, ikhamera ye-selfie ye-25 MP kunye nokunye